Saadiyoo Maanee - taphataa Senagaal fi Liivarpuul garee biyyaalessaa fi kilaba isaaf tajaajila guddaa kennaa ture, kaadhimamaa badhaasa BBC ta'eera - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Saadiyoo Maanee jaalala deeggartoota Liivarpuul argatee jira, dandeettiin barana agarsiise badhaasa BBC'f isa kaadhimsiisee jira
Taphataan cimaa Senegaal fi Liivarpuul Saadiyoo Maanee 2017'tti sochii'n gaarii agarsiise, badhaasa kabajamaa PFA'f miiltoowwan isaatiin filatamuurra darbee taphattoota 2 Afriikaarraa Baaloondi'oor irratti kaadhimaman keessaa isa tokko taasiseeraan.
Akkasumas Senegaal bara 2002 booda yeroo jalqabaaf waancaa adduunyaa irratti akka hirmaattuuf gahee olaanaa taphate.
Bara dorgommii gaarii garee biyyaalessaa Senegaal waliin yeroo itti dabarse waggaa kanatti, Maaneen, taphoota 9 irratti galchiiwwan 4 lakkoofsisee jira.
Maaneen saffisa guddaa, dandeetti kubbaa taphachuu fi dandeettii galchii lakkoofsisuu qabu jalqaba bara kanaarraa kaasee qabatee turuun isaa adda dha.
Abdiin guddaan irra kaa'amee taphoota lamaan jalqabaa Waancaa Afriikaa irratti erga galchii 2 lakkoofsisee booda - wanti badaa isa mudate.
Rukuttaa peenaalitii murteessaa ta'e tapha kaameeruun waliin taasisan irratti galchuu dadhabuun isaa biyya isaa mo'attuu waltajjichaa ta'uu dandeessu gara sadarkaa 4 keessa yoo buusuun, Mudannoon sun Maaneef fakkii hin taane kenneefii fuulli isaas imimmaaniin dhiqamee ture.
Saadiyoo Maaneen ala, ammeentaa injifachuu Liivarpuul qabu
Taphataa gaafa taphachuu baate kilabii fi biyy isaa miidhaman
Liivarpuul taphoota inni irratti hin hirmaanne 7 keessaa injifachuu kan danda'an 1 qofa, kun ammo dorggommii waancaa 2 keessaa isaan baasee ture.
Erga achii deebi'ee booda Liivarpuuliif kaka'umsa guddaa ta'uun Tootanhaam 2-0 yoo moo'an galchii lamaanuu lakkoofsisuurra darbee taphoota murteessoo Arsenaal fi morkkattoota cimaa kan ta'an Eevartan ittiin injifatan dirree fi dirreen alatti galchii lakkoofsisuu danda'e. Kanaafis Liivarpuul Maaneef galata guddaa qabu.
Ji'oota lamaaf miidhama jilbasaarra ga'een taphaan ala kan ture Maaneen, galchiiwwan 13 waliigalaa kan bara kamiiyyu caaluun dorgommii bara darbee xumure.
Taphoota xiqqoo irratti hirmaatus baay'ina galchiidhaan Kuutiinhoo waliin wal-qixa lakkoofsisuun kabaja kan qooddate Maaneen, Liivarpuul waggoota 8 keessatti yeroo lama qofaaf sadarkaa 4ffaa keessa turuun Chaampiyoons Liigii irratti akka hirmaataniif hedduu gargaareen.
Taphataa cimaa Liivarpuul akkasumas badhaasni PFA itti aansee kabaja argate dha.
Ji'a Fulbaanaa bara darbeetti hanga Maaneen kaardii diimaadhaan tapha Maanchistar Siitii irratti ba'utti Liivarpuul avereejiidhaan galchii 2.2 taphoota tokkoon tokkoon irratti lakkoofsisaa ture. Erga inni ba'ee booda kan ture 1.6'n wal bira yoo qabamu. Odeeffannoo dabalataaf hidhaa kana tuqaa: (http://www.bbc.co.uk/sport/football/41573042).
Yeroo taphaan ala ta'u faayidaansaa sirriitti kan mullatu taphataan murteessaa Liivarpuul fi Senegaal kun, kabaja Badhaasa Taphataa Cimaa Baranaa BBC gonfachuuf abdii guddaa qaba.
Warri Kiristaanaa ayyaana 'Good Firiday' karra cufatanii yeroo kabajan
UN Yaman bakka to'annaa Huutii jala jirutti gargaarsa walakkaan hir’isuuf
Magaalaa namoota koroonaavayirasiin irratti argameen biyyoota hunda caalte
Yaaddoo cimaa miidiyaalee maxxansaa Itoophiyaa mudate
Ispeen ibiddicha 'to’annoo jala oolchaa jirti'
Koroonaavaayiras kabaja ayyaana amantii attamiin jijjiiraa jira?